Literature/Books » လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား	25
kai says: ဒါက.. စာအုပ်အဖုံးလေး..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဲစာအုပ်ထဲမှာ လူကို အမေရိကန်၊ တိုင်းပြည်ကို အမေရိကား ။ အဲလိုပဲ ရေးထားတော့တာ။ သဂျီးပြောတဲ့ အမေရိကန်တွေ က တွေ နားမလည်တော့ဘူး ။ ရှုပ်ကုန်ပြီလေ။ အမေရိကပြည်ထောင်စုလား။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလား။ အမေရိကနိုင်ငံလား။ အမေရိကန်နိုင်ငံလား။။ အောင်မလေး ရူးရချည့်။
kai says: “America is full of dreamers. We push new frontiers by choice. That’s what makes us American.” —President Obama on why he’s optimistic that we can meet the challenge of climate change if we work together: go.wh.gov/Alaska ‪#‎ActOnClimate‬
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အခု စာအုပ်မှာ စကားပြောပိုင်းမဟုတ်ဘဲ စာပိုင်းမှာ အမေရိကပြည်ထောင်စု လို့ ရေးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာက ပြင်လိုက်တယ်။ မရဘူး သဂျီးရဲ့။ အခု ဂျာနယ်တွေ စာအုပ်တွေမှန်သမျှ ဘယ်သူမှ အမေရိကပြည်ထောင်စုလို့ မရေးကြရဘူး။ ကိုယ်ကရေးလည်း သူတို့က ပြင်လိုက်မှာပဲ။ နောက်အုပ်တွေမှာ အမေရိကပြည်ထောင်စုလို့ ရအောင်ရေးကြည့်ဦးမယ်။ မျှစ်ကြော်လည်း ဒါကို မှန်တယ် ထင်တယ်။
kai says: ကြိုးစားသာပြင်ပါ…။
တနေ့နေ့မှာ.. အိမ်ဖြူတော်ကနေ.. စာထုတ်ကန့်ကွက်ခိုင်းမယ်…။ Was this answer helpful?LikeDislike 12185
Alinsett @ Maung Thura says: စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ချင်တယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမရောပဲ။ စာတောင်သိပ်မဖတ်နိုင်ဘူး။ မဖတ်နိုင်ရင် ကျန်ခဲ့မှာပဲ သိနေရက်နဲ့
Ma Ma says: ( ၀တ္ထု ကောင်းတို့မည်သည် ၀တ္ထု ဆုံးမှ အတွေးစပါသည်။ )
မြစပဲရိုး says: Many Congratulation!
ကျား တစ်ယောက် ကို ရွေးချယ်ဖို့ “ကံ” တစ်ခု လဲ လိုသလားလို့။ lol:-)))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .တီမမ၊ အရီးလတ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: သံစဉ်လှိုင်းကတော့ ဖတ်ရင်း တန်းလန်းး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အမရောပဲ အွန်လိုင်းသုံးကတည်းက စာဖတ်တာကျသွားတယ်။ စာကို တစိမ့်စိမ့်ဖတ်ပြီး အရသာခံတတ်တဲ့ အကျင့်ရအောင် ပြင်ယူရဦးမှာ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ဟာ သိပ်ပြီးပေးစွမ်းတယ်။ အွန်လိုင်းကတောင် ဒီလောက်ပေးစွမ်းနေရင် ကမ္ဘာကျော်စာတစ်အုပ်ဟာ ပေးစွမ်းမယ်ဆိုတာ သေချာတာပေါ့။ ဒါကိုသိရက်၊ ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှန်း သိရက်နဲ့တောင် ခုတလော စာဖတ်အားကျလာတယ်။
Mike says: .၀ယ်ဖတ်ရမဲ့စာအုပ်စါရင်းထဲတို့ထားတယ်..စိတ်လည်းဝင်စားပါတယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဦးကြီးမိုက် ဖတ်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဦးကြီးမိုက် သမီးကတော့ ဖတ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ တနေ့မှာ ကမ္ဘာပတ်မယ့် တစ်ယောက်ဟာ ဒီစာအုပ်လေးတော့ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ စာမေးပွဲပြီးရင် အနားယူတဲ့အနေနဲ့ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ တနေ့ အိမ်ထောင်ပြု ဦးမှာပဲ မဟုတ်လား။ အရေးကြီးတယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
kai says: ရုပ်ရှင်ကလည်း.. မာလာလာကိုတင်ထားတယ်..။
လူလည်းတထွေ..ရေလည်း.. တခြား.. ဂြိုလ်သားသမီးများ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အနော်တို့လို ရွေးလွန်းလို့ မရသူတွေ ကျတော့ကော မွဝင့်….
ကိုယ်လဲ အများကြီး ရေးလို့မရ… သူများရေးတာလဲ အာရုံစိုက်လို့မရ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1377
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဟုတ်တယ် ဝေါင်းရေ။ အွန်လိုင်းမှာ စာဖတ်ပြီးရင် အဲလိုတွေဖြစ်ကုန်တာ ကိုယ်တွေ့။ စာအုပ် အားပေးမယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါတယ်။ ကားလမ်းကြပ်နေချိန်မှာ ဖတ်လို့ရတယ် ညီမရေ။ ဇာတ်က အသွက်မို့။ တစိမ့်စိမ့်ဖတ်ရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။
ဦးကြောင်ကြီး says: အီရန်က အခု ငပွဂျီး ဖြစ်နေတယ်။။။။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း ပဋိပက္ခ သူမွှေနေဆိုပဲ။။ ဝိုင်းဆဲဂျကွာ. အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် အီရန်က အလျှာတိုလာ မာမွပ်ခိုင်မ်ဆိုဒဲ့ မူလာဂျီးကို…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အီရန်ကို လျှော့တွက်လို့ မရ။ သူက လက်ဘနွန် ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့။ တကယ့် ငပွကြီး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စာအုပ်ကိုမဖတ်ရသေးတော့
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .စာအုပ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ရေးရတဲ့လူလည်း အားတွေရှိသွားတာပေါ့။ စာအုပ်ကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် လေးပေါက်ရေ။ အခု ထွက်တာကတော့ အသွက်ပါ။ အသွက်က ကျမ သိပ်မပိုင်။
အိပ်ပျော်တော့ မသွားစေနဲ့ ဗျ။ (ရှည်လွန်းလို့ အစကနားမထောင်ချင်ရင် 5:30 မိနစ် လောက်က စပြီး နားထောင်ကြည့်။) :-)))
Foreign Resident says: စန္ဒယား တီးတာ မလွယ်ဘူးပဲ ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျေးကျေးပါကိုလတ်ကြီးရေ
Ma Ma says: Typing tutor လိုမျိုး စန္ဒယားတီးသင်ချင်ရင် အဲဒီလိုခွေကြည့်ပြီး လိုက်တီးရင် ရမလားမသိဘူး။